Tsy nidina ny vidim-bary na efa fararano aza: tafakatra 10 000 Ar ny menaka iray litatra | NewsMada
Akora tena nahitana fiakarana tsy tapaka tao anatin’ny volana maromaro ny menaka fihinana eny an-tsena. Samy nisondrotra avokoa na ireo amidy miaraka amin’ny tavoahangy na ireo mbola mila tavoahangy asiana azy (en vrac).
8 500 Ar 10 000 Ar ny tavoahangy 1l iray raha tanamasoandro ny akora nanaovana azy ary 7 600 Ar ny menaka vita avy amin’ny soja. 7 000 Ar kosa ny menaka soja mbola tsy ao anaty tavoahangy vita voatra mialoha. Ireo mpikarakara sakafo masaka no maka betsaka ity sokajy faharoa ity fa lafo loatra ilay efa miaraka amin’ny tavoahangy. Vokatr’izay, nahitana fisondrotana ny sakafo mila menaka betsaka. Ny atody koa 600 Ar sy 650 Ar ny iray eny amin’ny mpaninjara fa tsy misy latsak’izay intsony. Amin’izao fotoana manakaiky ny fety izao, mety ho tafakatra 700 Ar ireo tena lehibe, hoy ny mpivarotra. Ny siramamy manodidina ny 3 000 Ar ny kilao eny amin’ny mpamongady fa maka tombony 200 Ar ka hatramin’ny 400 Ar ny mpaninjara ka tafiakatra 3 400 Ar ny kilao ho an’ny siramamy fotsy ary 3300 Ar ho an’ny mavokely.
Ny vary tsy nidina latsaky ny 2 500 Ar ny kilao ho an’ny vary vokatra eto an-toerana na efa fararano fotoana mampiakatra ny vokatra aza izao. Misy tafakatra hatramin’ny 2 800 Ar ny vary tsy vaovao satria mitombo kokoa. Ny vary “luxe” nafarana 2700 Ar ny kilao. Nampitaraina ny mpanjifa koa ny vidin’ny voankazo, 4 000 Ar ny voasary mandarine iray kilao ary 5 000 Ar ny papay lehibe iray, 3 000 Ar ny paokanelina iray.